राजधानीमा निशुल्क ईन्टरनेट !
काठमाडौं, ९ भदौ । सकारले सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो क्षेत्रमा आगामी दुई बर्षसम्मका लागि निशुल्क ईन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी सरकारे योजना अगाडी बढाएको छ ।
अमेरिकामा नेपाली बस्तु प्रवद्र्धन गर्न मेला हुँदै
काठमाडौं । वल्र्ड विजिनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्ट्यान्टले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले आउँदो असोज १४ देखि १६ गतेसम्म न्युयोर्कमा ‘नेपाल एक्जिबिसन एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड सो’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
बाढीको वितण्डापछि राडार सेन्सरको पहल
काठमाडौं । केहीदिन यता परेको वर्षाले बाढीको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकाले नदीहरुमा बाढीको पूर्व सूचना दिने राडार सेन्सर जडानको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । भोटेकोसीमा बाढी आएर करोडौंको क्षति भएपछि सरकारले बाढीसम्बन्धी
सरकारी कर्मचारीलाई इन्टरनेट प्रतिवन्ध !
एजेन्सी । इन्टरनेट आम मानिसको दैनिक जीवनसँग नभइ नहुने चीज जस्तै बनेको छ । विहान उठेदेखि नसुतुन्जेल मानिसहरु इन्टरनेटमा झुम्मिएका हुन्छन् । जसका केही सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्तिकै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । कार्यालयका कर्मचारीहरु इन्टरनेटकै कारण काममा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी समय दिन थालेपछि विभिन्न कार्यालयहरुले यसको कटौतीसमेत गर्न थालेका छन् । त्यतिमात्र नभएर गोप्य सूचनाहरु पनि चुहावट हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको पाइएको छ ।
अमेरिका । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको नासा प्रयोगशालामा व्यस्त एक नेपालीले आफ्नो खोजलाई सार्थक तुल्याउँदै लगेका छन् । लमजुङ राइनसका डा. सुरेन्द्र अधिकारी सानैदेखि सोध खोज र अनुसन्धामा रुची राख्दै आएकाले पनि उनी आज यो स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन् । उनले संसारभरिबाट पग्लिएको हिउँ कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्नको अनुसन्धानमा व्यस्त बन्दै उनले पृथ्वीसम्बन्धी नयाँ तथ्य पत्ता लगाएर विश्वभर एकाएक चर्चित बनेका छन् ।
चीनसँग ‘इन्टरकनेक्सन’को बाटो खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले काठमाडौंबाट चीनको सीमानासम्म अप्टिकल फाइबर जोड्ने काम सम्पन्न गरेसँगै चीनको चाइना टेलिकमसँग नेपालको टेलिकम सेवालाई ‘इन्टरकनेक्सन’ गर्ने बाटो टेलिकमले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको धुन्चे हुँदै चीनको सीमा रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर बिचछ्याएको हो । नेपाल टेलिकमका सह–प्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले भौतिक रूपमा काठमाडौं र चीन अल डाइलेक्टिभ सेल्फ सपोर्टिङ (एडिएसएस) अप्टिकल फाइबर जोडिएको जानकारी दिए।
हराएको मोबाइय यसरी भेटाउन सकिन्छ !
काठमाडौं । मोबाइल फोन यति धेरै आवश्यक चिज बनिसकेको छ कि थोरैबेर मात्रै आँखाबाट टाढा भयो भने पनि ठूलै समस्या झेल्नुपर्छ । मोबाइल कतिपय समयमा राखेको ठाउँ भूल्न सकिन्छ भने कतिपय समयमा हराउन पनि सक्छ ।
गोलभेडाबाट पनि उत्पादन हुन्छ बिजुली !
काठमाडौं । अब गेलभेडाबाट बिजुली निकाल्न सकिने भएको छ । साउथ डेकोटा स्कुल अफ माइन्स एण्ड टेक्नोलोजीर्की बैज्ञानिक नमिता श्रेष्ठले पत्ता लगाएकी हुन । उनले बिग्रिएका गेलभेडाबाट पनि बिजुली निकाल्न सकिने तथ्य पत्ता लगाएकी हुन । श्रेष्ठले साउथ डेकोटा अस्टिटेन्ट प्रोफेसर वेकटरामन्ना गधामशेट्टी र प्रिन्सटन...
डिजिटल प्रविधिबाट घरधुरीको सर्वेक्षण
इलाम। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरधुरी सर्वेक्षणको गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडाका दुईदेखि तीनजना स्वयम्सेवकलाई प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिएर घरधुरी सर्वेक्षणमा पठाउन लागेको छ ।